जब्बर ‘झम्की’ आमा ! | DNFMEDIA
जब्बर ‘झम्की’ आमा !
२०७७ पुष १६ गते, बिहीबार
सर्लाही । “पाल्ने भए यत्रो साल कहाँ गएका थियौ, किन नलगेका, तिमीहरु पाल्न होइन मलाई लुट्न आएको हो, ए भाइ हो ९गाउँलेलाई देखाउँदै०, यिनीहरु चोरी गर्न लागे, मलाइ बचाऊ‘ ।”
मेची­महाकाली उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार सडकबाट उठाएर आश्रममा लैजान खोज्दा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकास्थित सुखेपोखरी चोकमा एक महिला यसरी बेस्मारी चिच्याउनुभयो । “आमा अब जाम हिँड्नुहोस् घर, यहाँ बस्नुहुन्न”, स्थानीय वडा सदस्य सुकदेव कार्कीका प्रेमिल यी भनाइ उहाँका लागि वचन बाण बन्यो । त्यसपछि उहाँ झनक्क रिसाएर लाठी आक्रमणमा उत्रनुभयो । उहाँ त्यति मात्रै बोलेर चुप लाग्नुभएन । फोटो निकालेर बेच्न खोजेको आरोप लगाउँदै मुखमुखै लाग्नुभयो ।
पटकपटक अभियानकर्मीले उद्धार प्रयास गर्दा उहाँले लाठी लिएर लखेट्नुभयो । आक्रमणको शिकार हुने डरले उहाँलाई हत्तपत्त कसैले समाउने आँट गरेनन् । साथमा छोराझैँ हुर्काएर पालेको कुकुर उहाँको सहारा बनेर उभिएको थियो । उहाँको काखमा लुटपुटिएको कुकुरले कसैलाई छुन दिएन । जसले ती आमालाई छुन खोज्थ्ये, कुकुर झम्टिएर आक्रमण गथ्र्यो ।
केहीबेरको गलफतीपछि उद्धार टोलीले उहाँलाई सडकबाट उठाउन सफल त भयो तर उद्धार बाहनमा राख्न उत्तिकै कठिन भयो । उहाँलाई लगेको देखेर कुकुर निक्कै बेर छट्पटायो ।
कुकुरलाई साथै लैजाने प्रयास भने सफल हुन सकेन । जाडो मौसम भएकाले चोकमा आगो फुसफुस बलेर ताप्दै गर्दा उहाँलाई बुधबार उद्धार गरिएको थियो । डोरीको एक छेउ उहाँको कम्मरमा र अर्को छेउ बच्चैदेखि पालेको कुकुरको घाँटीमा बाँधिएको थियो । छिमेकीका अनुसार उहाँले त्यो कुकुर बच्चैदेखि पाल्नुभएको हो । छेउको अर्को बोरामा चार वटा कुकुरका छाउरासमेत थियो । उहाँको कम्मरमा सम्पत्ति राखनधरनको पोको खुबै संरक्षण गरेर राख्नुभएको थियो ।
पोको छोयो की आक्रमणमा उत्रनुहुन्थ्यो । पछि पोको खोल्दा एक हजार ६०० नगद फेला परेको थियो । छिमेकी गङ्गा बस्नेत कसैले नयाँ कपडा दिँदा उहाँले सबै अगेनामा लगेर डढाउने गरेको सुनाउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार परिवार नभएको पनि होइन तर परिवारले उपचार गर्न नसकेपछि सडकमा आउनुभयो ।
मानवसेवा आश्रमका उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद पौडेलका अनुसार अघिल्लो हप्ता पनि उहाँलाई उद्धारको प्रयास भएको थियो तर आक्रमण गर्न थालेपछि एक दुई जनाले नसकेर छाडिएको थियो । बुधबार नै अलि पर बजारमा भेटिएका बुद्धिमान वाइबालाई समेत उद्धार गरियो । परिवारमा कोही नभएपछि मागेर खान थालेको बताउने वुद्धिमानलाई पनि जान्न भन्दाभन्दै जबर्जस्ती उठाउनु परेको थियो ।
अपाङ्ग बुद्धिमान सडक मै मागेर बस्ने भनेर अड्डी कस्नु भएको थियो तर बेसहाराको खोजीखोजी उद्धार गर्न थालेको आश्रमले उहाँलाई सडकमा बस्न दिएन । बुधबार यसरी सर्लाहीका विभिन्न नगरपालिकाबाट ११ व्यक्तिलाई उठाएर यहाँ हालसालै स्थापना भएको आश्रममा संरक्षण दिइएको छ । उद्धारका क्रममा ३२ वर्षसम्म पिपलको छहारीमा जीवन गुजारेका व्यक्तिदेखि सडकमै बलात्कृत भएकी महिलासमेत भेटिए ।
उद्धारपछि सबैलाई हरिवन नगरपालिकाको प्राङ्गणमा पुर्याएर नुहाइधुवाई र सरसफाई गरी खाना खुवाइएको र त्यसपछि आश्रममा लगेर राखिएको छ ।नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका पौडेलले महत्वपूर्ण अभियानमा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै छिट्टै आफ्नो नगरपालिका बेसहारा सडक मानवमुक्त हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उद्धार अभियानकै क्रममा नयाँ स्थापना भएको हरिवनको आश्रममा ६० जना बेसहारा पुगेका छन् ।
उहाँहरु महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही जिल्लाका सडकपेटीबाट उद्धार गरिएका व्यक्ति हुन् । शुरुआती चरणमा आवश्यक स्रोतको अभावले बजारमा गएर मुठीदान समेत उठाएको आश्रमले जनाएको छ ।
“कसैले चामल, कसैले नगद तथा कसैले लत्ताकपडा दिनुभएको छ, यस्तो सहयोगको यहाँ जरुरी छ”, पौडेलले थप्नुभयो । पौडेलका अनुसार यसरी सडकमा आउने व्यक्ति फिरन्ते जीवन बिताउन चाहने जिल्ला बाहिरका धेरै रहेका छन् । अझ तराईका जिल्लामा भने भारतबाट बढी मानिस आएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले बेसहारा सडक मानवमुक्त मुलुक बनाउने उद्घोष गरेसँगै यसलाई सफल बनाउन मेची–महाकाली उद्धार अभियान चलाएको छ । एक हप्ताको अन्तरालमा सडकमा रहेका ३०० भन्दा बढीको उद्धार भइसकेको छ । उक्त अभिायन आज वीरगञ्ज र आसपासमा चल्दै छ । (रासस)
Previous: विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेसले आन्दोलन गर्दैनः सभापति देउवा
Next: हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको माग गर्दै राप्रपाले आज काठमाडौंमा आमसभा गर्दै